ရပ်တန့်ခု:သင်၏နာငြီးဘဲကောင်းတစ်ခုရွေးချယ်ရေး၏ညမ်းဂိမ်းကြည့်ဖို့အကြောင်းသက်သက်ကပတ်ပတ်လည်အခြေကာတွန်းနှင့်အခြားအမျိုးအစားများကာတွန်းစာအုပ်လေယာဉ်ပျံ? ကောင်းစွာ၊အလွန်ကြီးစွာသောသတင်းခံစားရ၏နာကျင်မှုကို၊နှင့်အတိအကျဘာကြောင့်ကာတွန်းလိင်ဂိမ်းများဖန်တီးခဲ့ပထမနေရာအတွက်! ပထမဦးဆုံးဖြန့်ချိမှာသြဂုတ်လ ၂၀၁၆၊ကျနော်တို့သတိထားမိတဲ့အကြီးအကျယ်ကွာဟချက်အတွက်ဈေးကွက်ကိုရောက်တော့ဒါဟာအနောက်တိုင်းစတိုင်အနုပညာနှင့်နှိုးဆှ။, ရဲ့ရိုးသားတဲ့ဖွစျပါစေ၊အထွေထွေအမျိုးအစားများလိင်ဂိမ်းအားလုံးမဟုတ်ပါကြောင်းကြီးမြတ်၊ဒါပေမယ့်အကယ်၍သင်ထည့်သွင်းလိုအပ်ချက်အတွက်ကာတွန်းစိတ်–အမှုအရာရသွားတော်တော်ခက်ခဲပါတယ်၊တော်တော်လျင်အမြန်။ အဓိကအာရုံစူးစိုက်၏ကာတွန်းလိင်ဂိမ်းများသည်ထွက်ဖြတ်ဖို့အားလုံးသောက်သုံးသည့်အခါအကြှနျုပျတို့စတင်ခဲ့၊ကျနော်တို့အလွန်လျှင်မြန်စွာသဘောပေါက်ရုံမည်မျှအလိုရှိ၏ထုတ်ကုန်များအတွက်၌ဤအထူးသဖြင့်ဒိုမိန်း။ ယနေ့အချိန်တွင်၊ကျွန်တော်ကြွားမားတဲ့၊မိသားစုကဲ့သို့ကွန်ရက်ရဲ့အပေါ်သို့တည်ဆောက်သစ္စာစောင့်သိပရိသတ်နှင့်ကျိန်အုပ္ဆုိင္အတူတကွအလုပ်လုပ်နိုင်အောင်သူတို့မြောက်အလွန်ကြီးစွာသောအမှုအရာ။, စိတ်ထဲတွင်ထိုအတူ–သင်သည်အချိန်ရဲ့စဉ်းစားသင်တို့အဘို့အရှာဖွေဖို့တစ်ဦးပွဲချင်းပြီးဖြည်အားလုံးအတွက်သူတို့အားဒြပ်စင်? သင်ထိမှန်င်အမှန်ရောက်လျှင်ဒီတော့စဉ်းစား!
ဝေးအားဖြင့်၊အရေးကြီးဆုံးအရာဖော်ပြရန်ဖို့ဒီမှာ–ကျွန်တော်တို့ရဲ့အကြီးမြတ်ဆုံးအရောင်းတဲ့လုပ်ငန်းဆောင်–အပိုဒ္အချဉ်းကပ်မှုရရှိပါသည်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့သုတေသနထဲမှာညွှန်ပြအစောပိုင်းကာလအကြောင်းညမ်းဂိမ်းများမကြည့်ခဲ့သောအလွန်ကြီးစွာသော၊နှင့်သောသူတို့၏ကောင်း၊အလွန်နည်းပါးခဲ့ၾကတက်ကြွစွာဖွံ့ဖြိုးပြီးနှင့်ထိန်းသိမ်းထား။ ကြိုးစားပြီးဒီပြဿနာတွေကိုသက်သာစေနိုင်၊ကျနော်တို့ကယ့်ကိုအများကြီးကြိုးစားအားထုတ်မှုနဲ့စွမ်းအင်ဖန်တီးခြင်းသို့တစ်ရုပ်ပြစာအုပ်ညမ်းဂိမ်းစုဆောင်းခြင်းတကယ်အဆုံးမဲ့။, ထုတ်လုပ်မှုအာရုံစူးစိုက်မှာအဆိုပါအောင်အပေါ်အကောင်းဆုံးရှာဖွေနေစီမံကိန်းနိုင်–အရာတစ်ခုခုအပေါ်သစ္စာပရိသတ်များကအတည်ပြုသည်ငါတို့အဘို့အအချိန်နှင့်အချိန်နောက်တဖန်အရာတစ်ခုခုသည်ခဲ့ပြီးပြီမယုံကြည်နိုင်လောက်အောင်မြင်မှာလုပ်နေတယ်။ ပျမ်းမျှအစားခံရရန်လိုအပ်သည်အမြင်အာရုံနှိုးဆွပေး၊နှင့်နေစဉ်ကျွန်တော်တို့လေးမြတ်တန်ဖိုးစာသား-အခြေပြုလိင်ဂိမ်းများ၊ဒါကြောင့်တစ်ဦးသေဆုံးအမျိုးအစား–အထူးသဖြင့်ကတည်းကဂရပ်ဖစ်ဒီရက်နိုင်ပါတယ်တော်တော်ကောင်းနှင့်အတူအတော်လေးကန့်သတ်စုဆောင်းမှု၏။ ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်တခြားအဘယ်အရာကိုဖော်ပြရကျိုးနပ်သောအချက်ဖြစ်ပါသည်ကာတွန်းလိင်ဂိမ်းများနိုင်စွမ်းဖြစ်ရန်ပြေးအပေါ်အနိမ့်စက်။, ကျနော်တို့ဤအမှုကိုပြုသောအထူးသဖြင့်အထောက်အကူပြုဖို့မည်သူမဆိုနှင့်အတူကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းမှနိုင်မိမိတို့လက်ရရန်သည်အဘယ်အရာကိုကျနော်တို့ကမ်းလှမ်းမှုကိုဖို့ရှိသည်။ ညမ်းဂိမ်းမဖြစ်သင့်မူပိုင်ခွင့်အပေါ်လူမျိုးအဘို့ ၃၀၀၀ စီးရီးအဆင့်မြင့်၊ဒီတော့သိတဲ့အခါသင်တက်လက်မှတ်ထိုးနှင့်အတူ၊သင်သွားဖို့အနိုင်ကစားရန်ကျွန်ုပ်တို့အားကစားပြိုင်ပွဲ–သူတို့သည်အလွန်ကြီးစွာသောကြည့်ရှုလိမ့်မယ်–ပင်လျှင်ပြေးသင်သည်အဘယ်သို့အပေါ်အတိအာလူး။
တသောနည်းလမ်းအတွက်လုံခြုံစေရန်လူတို့လက်လှမ်းမီရှိခြင်းအကျွန်ုပ်တို့သည်အချက်အလက်အားဖြင့်ကမ်းလှမ်းဂိမ်းများရှိသည်ဖြင့်။ ဒီနှင့်အတူကြွလာ၏ထည့်သွင်းအကျိုးကျေးဇူးမများဒေါင်းလုဒ်လုပ်ဖို့ဘာမှမသင့်ရဲ့ဒေသဆိုင်ရာအစက်–အရာအားလုံးဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်တဆင့်တိုက်ရိုက် Chrome၊မြေခွေးမှာသို့မဟုတ်ဆာဖာရီ။ ဒီအများဆုံးညားချဉ်းကပ်မှု၏တစျခုနည်းလမ်းကျွန်တော်တို့မဖန်တီးရန်လိုအပ်ပါတယ်တစ်ဦးချင်းဖိုင်တွေကိုထောက်ပံ့ဖို့လူတွေအပေါ် MacOS၊Linux နှင့်ပြတင်းပေါက်များ။, အိုး၊အကယ္၍သင္ကအကာတြန္းလိင်ဂိမ်းများအားဖြင့်မိုဘိုင်းကိရိယာ၊ကျနော်တို့ကျေနပ်နေတဲ့အကြောင်းပြောပတ်လည် ၆၀%ကျွန်ုပ်တို့၏ခေါင်းစဉ်ခဲ့ကြ ported အသံုးျပဳကနေတဆင့်တစ်ဦးထိတွေ့မျက်နှာပြင်အတွက်သင့်လျော်။ တစျနေ့ကကျနော်တို့ချင်ပါတယ်တိုးဒီရေအတက်ဖို့ ၁၀၀%၊ဒါပေမယ့်ကိုယ့်ကိုသိရရှိပါသည်ကြောင်းကိုသင်ပိုပြီးထက်သင့်၏တရားမျှတရှယ်ယာအလွန်ကြီးစွာသောဂိမ်းများကစားရန်–အားလုံးအရာ၏အကြောင်းဂန္ကာတြန္းဗေဒါကချည်နှောင်စေပည္ဆိုင္ရာ! ကာတွန်းလိင်ဂိမ်းများရှိသည်ပါဘူး၊တစ်ဒေါင်းလုဒ်လုပ်လို့ညာဂ်ာပြတင်းပေါက်များအဘို့အနိုငျသောအော့ဖ်ကစား၊ဒါပေမယ့်ကျေးဇူးပြု၍စိတ်ချပါအရာက္ဇာလက်လှမ်းပုံစံမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်တို့ဟာအဆင့်။, ကျနော်တို့ချစ်နိုင်ဖြစ်ခြင်းမပေးဖို့တတ်နိုင်သမျှလူများစွာမှဝင်ရောက်ခွကျွန်တော်တို့ရဲ့စုဆောင်းမှု၏ခေါင်းစဉ်!
ဖျားနာပြီးမောပန်းများသာတွေ့နိုင်သည်နိုင်ဖြစ်ခြင်းဆယ်ကျော်သက်ညစ်ညမ်းဖြန့်ချိနှင့်အတူအနုပညာကာတွန်းစတိုင်? ၏သင်တန်းကိုသင်! အလွန်ကြီးစွာသောသတင်းဖြစ်ပါသည်ကတည်းကကျနော်တို့ကျဖင့္၏ဂိမ်းနှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏မိုလ်ရရန်ကြိုးစားနေကြတတ်နိုင်သမျှလူများစွာအတွက်ပါဝင်ပတ်သက်အရေးယူ၊ကာတြန္းလိင်ဂိမ်းများအဖုံးများအများကြီးတစ်ငရဲ၏လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဦးစားပေး။ ကျွန်တော်တို့မှာသင်ျဂိမ်းများချင်သောသူတို့အဘို့စောင့်ရှောက်ဖို့အတွက်မိသားစု၊MILF အရေးယူကြောင်းကျေနပ်နှင့်အတူမည်သူမဆိုအရသာအဘို့အရင့်ကျက်လိင်တူဖြန့်ချိလိုအားလုံး-မိန်းကလေးကိစ္စနှင့်လုံလောက်တဲ့ထက်ပို smut အဖုံးနှင့်အတူလူများအကျိုးစီးပွားအတွက်ခြေ၊blowjobs၊စာမျက်နှာများနှင့်ပို။, အရောထွေးအိတ်ချဉ်းကပ်မှုရှိပါတယ်တကယ်ပေးဆောင်ငွေနှင့်စိတ်လှုပ်ရှားင့်နိုင်စေဖို့ဆက်လက်၊ဤလမ်းကြောင်းကိုဆင်း–မယ့်သင့်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်အပူချိန်နှင့်တော့အချို့! ငါတို့သည်လည်းႏွစ္လထဲမှာ၊ပုံမှန်ဖို့ခွင့်ပြုလိမ့်မည်သည့်အပေါ်ဘယ်နယ်ပယ်သင်ချင်ပါတယ်အတွက်ကျွန်တော်တို့ကိုစူးစမ်းဖို့လာမယ့်။ အထားကိုအနီးကပ် tabs ပေါ်အဝန်းကိုနားလည်ရန်မိမိတို့အလိုဆန္ဒနှင့်အဘယ်မှာဖြစ်နိုင်၊ကယ်နှုတ်ဖို့သူတို့ကိုအတိအကျအဘယ်အရာကိုသူတို့ချင်တယ်။ ကာတွန်းလိင်ဂိမ်းများဘို့အကဒီမှာအကောင်းနဲ့အချိန်အကြာကြီး–အဆိုပါပြီးပြည့်စုံသောရောနှောလျှင်သင်ကျွန်တော်တို့ကိုမေးမြန်း!
ကျွန်တော်ထင်တာကကိုယ့်အကြောင်းကိုမသည်အဆိုပါကာတွန်းလိင်ဂိမ်းများဒေနာရိဂိမ်း:ခဲ့တယ်တာက္ပတဲ့အချိန်အကြောင်းပြောနေတာကျွန်ုပ်တို့၏စီမံကိန်းနှင့်အကြောင်းစဉ်းစားသူမည်သူမဆိုရဲ့အပေါ်စိတ်အားထက်သန်ဤအပြောင်းအလဲဆှဖျော်ဖြေရေးသွားပြီတစ်ဦးလုံးဝတောက်ပသောအချိန်ပတ်လည်ကြည့်ရှုကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒေတာဘေ့စ။ ဒါကြောင့်သဘာဝအတိုင်း၊ဒီပဲရွက်တစ်ခုမှာမေးခွန်းမေး:အဘယ်ကြောင့်သင်ပြီးသားကြပြီမဟုတ်ပူးပေါင်း? ကာတွန်းလိင်ဂိမ်းများသည်ယုတ္တိခရီးအဘို့အရွေးချယ်မှု၏ဂိမ်းကစားချင်သောပူးပေါင်းအစက်အပြောက်သောအမှုကိုစောင့်တစ်ဦးခြားနားချက်စေသည်!, ကျနော်တို့ကာတွန်းဖြန့်ချိနေ့ရက်ကာလအဘို့နှင့်အမြန် ocular ပုတ်-အဆင်း၏အကုိယ္တုိင္လာေပစ္စည်းမှာဖြစ်ကောင်းသင်ပြသောကျွန်ုပ်တို့၏ကာတွန်းချဉ်းကပ်မှုအပြီးပြည့်စုံသော။ ထို့ကြောင့်တစ်ခုတည်းသောယုတ္တိရွေးချယ်မှုသင်တို့အဘို့အတက်လက်မှတ်ထိုးရန်နှင့်ပေါ်တွင်သင့်လက်ကိုရရန်အကောင်းဆုံး၏အကောင်းဆုံးမှကြွလာသောအခါကာတွန်းလိင်ဂိမ်းများ။ စာဖတ်ခြင်းများအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်–သင့်ရဲ့မြည်းကိုအတွင်းအပြင်နှင့်နားလည်သဘောပေါက်ကြောင်းချက်ချင်းဒီညမ်းစုံလင်!